गुगलले ईमोजिस लेख्न क्रोममा सर्टकटको परीक्षण गर्दैछ ग्याजेट समाचार
गुगलले ईमोजिस लेख्न क्रोममा सर्टकटको परीक्षण गर्दैछ
इमोजी वा इमोटिकन्सको प्रयोग धेरै व्यापक छ। अधिक के हो, ती दुबै मोबाइल फोनमा व्हाट्सएप मार्फत कुराकानी गर्न र ईमेलको उत्तर दिनका लागि प्रयोग गरिन्छ। साथै, र हामी तपाईंलाई भन्छौं, यसको प्रयोग यति व्यापक छ कि हामी पनि प्राय: यी आईकनहरू हाम्रो डेस्कटपहरूमा प्रयोग गर्दछौं.
यद्यपि यो सत्य हो कि तीनिहरू पहुँच गर्नु सजिलो छैन। हामी यो भन्न सक्दैनौं कि यो प्रयोग गर्न गाह्रो विकल्प हो, तर ईमोजिसको पूर्ण सूची छान्नका लागि सक्षम हुन यो एकदम बोझो छ। संक्षिप्तमा: कम्प्युटरमा तिनीहरूलाई मजा लिन व्यावहारिक छैन। अब, यस्तो लाग्छ कि गुगलले यस अर्थमा हाम्रो जीवन सजिलो बनाउन चाहन्छ। र तिनीहरू पहिले नै एक सर्टकटको परीक्षण गर्दैछन् यसले हामीलाई यी ईमोजीहरू गुगल क्रोममा छनौट गर्न मद्दत पुर्‍याउँदछ र किबोर्ड शर्टकटहरूलाई छोडिदिन्छ.
जे होस् यो सत्य हो कि म्याकमा - तपाइँलाई उदाहरण दिन - जब हामी कुञ्जी संयोजन Cmd + Ctrl + स्पेस पूरा गर्दछौं, एक पप-अप विन्डो उपलब्ध ईमोटिकन्स वा इमोजीहरूको पूर्ण सूचीको साथ पर्दामा देखा पर्नेछ। तर गुगलबाट उनीहरूले माउसको साथ साधारण क्लिक गर्न सरलीकरण गर्न चाहेको छ। कसरी? राम्रो प्रत्येक पटक हामी गुगल क्रोममा छौं र हामी एउटा संवाद बाकस, ठेगाना बार, आदि मा दायाँ माउस बटन थिच्दछौं। हामीले लेखेको पाठमा इमोजीहरू समावेश गर्ने विकल्प देखा पर्नेछ.
जे होस्, यो अझै बेटामा छ र अन्त प्रयोगकर्ताहरूमा पुग्नेछ। एक क्षणकाे लागी यो प्रकार्य गुगल क्रोम क्यानरी संस्करण मार्फत परीक्षण गर्न सकिन्छ, लोकप्रिय इन्टरनेट ब्राउजरको संस्करण जुन विकासकर्ताहरूमा केन्द्रित छ वा प्रारम्भिक अप्टरहरू जो नवीनतम सुविधाहरू जाँच्न चाहन्छन् जुन ईन्टरनेट जायन्टले आफ्ना उत्पादनहरूमा समावेश गर्न चाहन्छ। अवश्य पनि, परीक्षणको लागि उत्पादन हो, यो पूर्ण रूपमा कार्यरत छ भने पनि, यो समय-समयमा असफल हुने सम्भावना धेरै हुन्छ।
अब, यदि तपाईंसँग प्रयास गर्ने निर्णय गर्नुभयो भने गुगल क्रोम क्यानरीब्राउजरमा यो इमोजी प्रकार्य सक्रिय गर्न तपाईंले ठेगाना पट्टीमा निम्न अनुक्रम लेख्नुपर्दछ:
क्रोम: // फ्ल्यागहरू / # सक्षम ईमोजी-संदर्भ-मेनू
एक पटक यो सकिएपछि, दायाँ माउस बटन क्लिक गर्न प्रयास गर्नुहोस् र मेनूमा देखा पर्ने पहिलो विकल्प "इमोजिस" जाँच गर्नुहोस्। एक क्षणकाे लागी गुगलले ब्राउजरको अन्तिम संस्करणमा यसको उपलब्धताको बारेमा केहि पनि उल्लेख गरेको छैन.
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » सामान्य » सफ्टवेयर » गुगलले ईमोजिस लेख्न क्रोममा सर्टकटको परीक्षण गर्दैछ
के शौचालय सिटले तपाईंलाई बहिरा बनाउन सक्छ?
फेसबुकले तपाईंलाई मेसेन्जरमा सन्देशहरू मेटाउन अनुमति दिनेछ